Fitaovana sy fifehezana hazavana ao anaty rano LED Ryokai
Karazan-vokatra: Fampidirana ny fizotran'ny asa sy ny famokarana jiro momba ny tontolo iainana Nentin'ny hazavana teknika anaty rano: karazana hazavana anaty rano LED, manohana ny fenitra USITT DMX512 / 1990, ambaratonga volondavenona 16, haavon'ny volondavenona hatramin'ny 65536, mahatonga ny loko maivana marefo sy malefaka kokoa. B ...
Jiro amin'ny tany LED Fifidianana vokatra azo ampiasaina amin'ny jiro
Ny jiro amin'ny tany / jiro mihodina ankehitriny dia be mpampiasa amin'ny haingon-trano valan-javaboary, bozaka, kianja, tokontany, fandriana voninkazo ary arabe mpandeha an-tongotra. Na izany aza, tamin'ny fampiharana azo ampiharina aloha dia nisy olana isan-karazany niseho tamin'ny jiro nalevina tamin'ny LED. Ny olana lehibe indrindra dia ny olana amin'ny rano. LED amin'ny grou ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny loharano hazavana LED mety
Ahoana ny fomba hisafidianana ny loharano hazavana LED mety amin'ny hazavana any an-tany? Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana fitsitsiana angovo sy fiarovana ny tontolo iainana, dia mampiasa jiro LED hatrany amin'ny famolavolana hazavana amin'ny tany izahay. Ny tsena LED amin'izao fotoana izao dia fifangaroan'ny trondro sy dragona, tsara sy ba ...
Amin'ny maha-ampahany manan-danja amin'ny tontolo iainana
Amin'ny maha-ampahany manan-danja amin'ny tontolo iainana, ny jiro eny an-kalamanjana dia tsy mampiseho ny hevitry ny tontolo fotsiny ihany koa. Landscape ivelany ara-tsiansa, manara-penitra ary sariaka ho an'ny mpampiasa ...